फिनिशिंग सुझावहरू तपाईंलाई आफ्नो घरमा सजिलै आराममा महसुस गर्न
अपार्टमेंट, घर र प्रस्तुत
अधिक भण्डारण ठाउँको लागि सुझाव
जीवनको बारेमा थप पृष्ठहरू
पल तपाईंले नयाँ अपार्टमेन्ट वा नयाँ घर प्रविष्ट गर्नुहुने छ कि तपाईं किराया गर्न वा खरीद गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईलाई नामक स्पार्क छोड्नु पर्छ। जब तपाईं नजिक हेर्नुहुन्छ र परिसरमा हेरौं, भावनालाई धेरै बलियो हुनुपर्छ कि तपाई आफैले कोठामा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको अन्तर्वार्ताले पहिले नै निर्णय गर्दछ कि तपाइँ यी कोठाहरूमा सहज महसूस गर्न सक्नुहुन्छ।
घर मा घर मा महसुस गर्नुहोस्
सबै केहि राम्रो देखिन्छ, सबै केहि राम्रो लाग््छ: एक ठूलो लिङ्ग रूम, एक आरामदायक चिमनी, एक सुंदर बगैचा, एक महान आधुनिक भान्सा - एक सपना सच लग रहेको छ!
तर त्यो केहि हराइरहेको छ, तपाईं छोटो समय पछि ध्यान दिनुहुनेछ।
रचनात्मक आन्तरिक डिजाइन विचारहरू प्रायः केवल साना विवरणहरू हुन्
त्यहाँ कुनै पछाडि हटाइएको छैन, जहाँ तपाईं पूर्वनिर्धारित हुन सक्नुहुन्छ कुनै ठाउँ छैन।
यो अझ राम्रो र ठीक महसुस गर्दैन। चिमनी पनि न्यानो हुन सक्छ, यो सँधै ठंड हुन्छ। के भयो? तिनीहरू पत्ता लगाउने प्रयास गर्ने गल्ती भयो, तर तिनीहरूले जवाफ पाउन सक्दैनन्। केवल महसुस मात्र भन्छ: यहाँ म घरमा छैन! तर "घरमा रह" भनेको वास्तवमा के हो? एक अपार्टमेन्टले के गर्छ र तपाईले भन्न सक्नुहुनेछ: म मेरो घरमा राम्रो महसुस गर्न सक्छु!
तपाईंले यो महसुस गर्नुहुने पहिलो कुरा हो कि घरको घरको ठूलो कोठा र बगैचाको साथ केहि गर्न को लागी, चिमनी वा उच्च प्रविधि भान्सा संग पनि।
घर मात्र एक ठाउँ हुन सक्छ जहाँ हामी 100% आरामदायक, शान्त रमाइलो हुन्छौं र एक व्यक्ति र हामी जहाँ हो।
प्रत्येक व्यक्ति, एक अर्को भन्दा कम, आफ्नै घर सुरक्षा र सुरक्षा, सुरक्षा र न्यानो खोज्छ। आवश्यकता हरेक मनुष्यमा दृढतापूर्वक एङ्गर्ड गरिएको छ।
गार्डमा थप निरन्तरता नगर्ने, आन्तरिक अलार्म प्रणाली बन्द गर्दै, बसोबास गर्दै, यसको मतलब घरमा रहन्छ।
एक अध्ययनले देखेको छ कि अधिकतर मानिसहरू नेक्सेजमा स्क्वायर कोठाहरूमा सहज महसूस गर्छन्। विकार पनि यसको भाग हो। यो गंदे बर्तन होइन भन्ने कुरा हो कि दिनको लागि स्पुलीमा पाइन्छ। होइन, यसको मतलब फोटोहरू भित्तामा, क्यान्सरमा क्रीम र क्यान्सरमा स्पाइस रैकमा क्यान्सर र शैम्पू बोतलहरूमा फाँसिन्छन्।
एक वास्तविक घर एक अपार्टमेन्ट हो जुन मान्छे मा बस्छ भनेर देखाउँछ। पनि पहिलो क्षण तपाईंले नयाँ अपार्टमेन्ट प्रविष्ट गर्नुभयो वा नयाँ घर तपाईंको स्वतन्त्र तंत्रिका तवरमा प्रतिक्रिया गर्नेछ। तपाईं सहानुभूति महसुस गर्नुहुन्छ, यदि तपाईं यो नयाँ घरमा सहज महसूस गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रत्येक इन्च एक सानो अपार्टमेटमा महत्त्वपूर्ण छ र तपाई ठाउँ खाली गर्न सक्नुहुन्न। जो मान्छे आफ्नो निपटान मा सानो ठाँउ छ चाँडै अराजकता मा डूब जाएगी। जूताहरू हलवेमा पालिएका छन्, जैकेटहरू रोक्छन्, र वरिपरी झन् जेबहरू बनाइदिनेहरूले छिट्टै छिटो ठोक्छन्। साथै भान्सामा काम सतह अविश्वसनीय धेरै चीजहरू संग कब्जा गरिएको छ। हामीले तपाईंको लागि अधिक भण्डारण ठाउँको लागि उत्तम सुझाव पाएका छौं।
तपाईंको अपार्टमेन्ट प्रस्तुत गर्दा तपाईंको आफ्नै शैली पत्ता लगाउनुहोस्
विशेष गरी साना अपार्टमेट्समा, चीजहरू झन् झन् झन् कोठाको रूपमा हेर्छन् र धेरै भ्रमहरू। हल मा एक अलमारी, जो धेरै भण्डारण ठाउँ प्रदान गर्दछ, चाँडै उपचार गर्न सक्छ। यो बेडिङ, तौलिया, थैला र वैक्यूम क्लीनरको लागि पनि आदर्श छ।
एक सानो अपार्टमेन्टमा तपाइँ सजावटको साथ धेरै कुराको साथ व्यवहार गर्नु पर्छ, किनकी अन्यथा कोठा फेरि छक्क परे जस्तो देखिन्छ।
अधिक साना चीजहरू र सजावटी वस्तुहरू हुन् वा हुन्, अधिक बेइमानी र अनौफरगरमटरले जीवित ठाउँलाई असर गर्छ।
यदि तपाईं भान्सामा भण्डारण ठाउँ सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने, पर्खाल एकाइहरू र ढोकाहरू संग छतमा भर पार्नुहोस्। त्यहाँ, तथापि, केवल चीजहरू भण्डारण हुनुपर्छ जुन हरेक दिन आवश्यक छैन, किनकि यी केवल स्टूल वा सीढी संग पुग्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि मसालेका लागि टोकरीहरू फाँट गर्दै आदर्श स्थान बचतकर्ताहरू छन्। यदि तपाईं पनि भान्सामा खाना खान चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले एक पर्खालको तालिका रोज्नु पर्छ। तपाईले मात्र यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जब। अझ लामो काम सतह, जुन ढोकाहरूसँग उच्च तालिकाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, एक सानो भान्साको लागि उपयुक्त छ।
भण्डारण ठाउँ सिर्जना गर्न एक राम्रो टिप एक ढोकाको माध्यमबाट हुन सक्छ। ढोकाको ढोकाको स्थानमा डेस्क, सोफा वा अलमारीको साथमा लैजान सकिन्छ
एक सीढी अन्तर्गतको स्थान धेरै कम परिवारमा सार्थक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। खास गरी त्यहाँ यो मेल खाने क्यालोरी वा अलमारियों संग कोठा प्रयोग गर्न समझदारी गर्दछ।
यदि तपाईंसँग अपार्टमेन्टमा पर्खालको ढोका छ भने, एक राम्रो फर्नीचर स्टोरमा सल्लाह पाउनुहोस्। अलमारियाँ पक्ष द्वारा, ठूलो वा सानो द्वारा हुन सक्छ, धेरै ठाउँ प्रदान गर्दछ र धेरै राम्रो देखिन्छ। किनकि खरिद एकदम बढी छ भने, यो निश्चित रूपमा तपाईँलाई थप ठाउँ सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ।
यदि तपाइँ कार्यात्मक फर्नीचर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाइँ सम्पूर्ण कोठा सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ। ठूलो बाडा किनेको सट्टा, सोफेको बेड छान्नुहोस् र फर्नीचर अन्तर्गत ड्ररको खोजी गर्नुहोस्। सानो कोठामा तपाईंले ठूलो बिरुवा बिना गर्नु पर्छ, भित्री फूल पनि सुन्दर देखिन्छ।
राम्रो तरिकाले नर्सरी सेट अप गर्नुहोस्
Orchids हेरविचारमा त्रुटिहरू नदिनुहोस्
उपकरणबक्समा के छ?
Kinderteppiche - नर्सरी सामान | ...
एक नर्सरी सेट अप गर्नुहोस् अपार्टमेन्ट घर
भूमध्य सामान | अपार्टमेन्ट घर
रचनात्मक गृह डिजाइन विचारहरू | अपार्टमेन्ट घर
रचनात्मक गृह डिजाइन विचारहरू | घर अपार्टमेन्ट
अपार्टमेंट पुनःस्थापना गर्नुहोस् | घर
गार्डन तालाब | घर अपार्टमेन्ट बगैचा
पृष्ठ व्हाइट हाउस रंग
बगैचाको साथ पृष्ठको पृष्ठ रंग
पृष्ठ घर रंग
पृष्ठ घर विजयी